Amazon Fire takelaka famerenana - News Fitsipika
Amazon Fire takelaka famerenana
Tena ambany aho fanantenana ny £ 50 takelaka. Fa ny Amazon afo nahatorotoro azy rehetra. Tsy tena miavaka ny marina dia tsy fomba-fako izany vidiny izany rehefa kely.
Ity lahatsoratra mitondra ny lohateny hoe “Amazon Fire takelaka famerenana: be dia be ny takela-kazo ho an'ny fotsiny £ 50” nosoratan'i Samuel Gibbs, fa theguardian.com ny alakamisy faha-12 Novambra 2015 07.00 UTC
Amazon ny farany ambany dia ambany vidiny afo manontany ny fanontaniana: afaka ny takelaka izay mametraka indray fotsiny ianao £ 50 isan-, na mividy dimy ka hahazo iray maimaim-poana, ho zavatra tsara mihitsy?
Izany ny fahadimy dikan-tany am-boalohany Fire takelaka, izay nanomboka voalohany amin'ny 2011 tahaka ny Amazon ny ezaka mba undercut Apple ny iPad, ary mamokatra ny vidiny ambany-takelaka ny mampiasa ireo boky sy horonan-tsary asa.
A no-frills mainty Mat plastika vatana. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
matevina, chunky sy matanjaka no tsara indrindra famaritana ny afo takelaka. Rakotra in textured mainty plastika, izany milanja 313g, ambonin'izy 1cm matevina ary mahatsapa mavesatra eo an-tànan'ny.
Dia mahatsapa toy ny hoe afaka maka nandondona na roa tsy misy olana. Amazon milaza ny afo takelaka dia avo roa heny toy ny mateza ho Apple iPad Air 2 ao amin'ny orinasa "nianjera fitsapana". Afaka tsara aho mino fa, fa ny haben'ny kely angamba milalao anjara lehibe amin'izany.
Ny nanao lahateny tao amin'ny indray dia mafy hijery ampy lahatsary rehefa handheld, fa tsy mafy na mazava ampy lahatsary iray raha hijery ny milina fanasan-damba mandeha hitora manontolo ao an-dakozia.
Ny lamba dia tsy 7in HD. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny lamba dia tsy 7in HD. Izany dia ny fanapahan-kevitra ny 1024 X 600 teboka, izay eo ambany ny kely indrindra ho an'ny HD 720p famahana. Izany ihany koa dia manana somary ambany dia ambany Pixel hakitroky ny 171 teboka isan-mirefy - dia tsy iPad izy io, sady tsy noho ny fahenina ny vola lany.
Fa ny varavarana lamba dia mahagaga tsara ho an'ny vidiny. Izany antonony mamirapiratra, manana fijery fijerena tsara sady maro loko, na dia ny mainty hoditra dia somary fotsy. Kanefa tsy manana fahazavana Ambient sensor, ka ianao tsy maintsy tanana hanitsy izany mba tsy jamba-tena amin'ny alina, ary tsy tena miavaka.
Tsy ratsy loatra noho ny fijerena horonan-tsary, na milalao lalao, raha izany passable ny famakiana boky.
Games, fampiharana sy ny sarimihetsika dia tsara
Ny afo takelaka manana 5GB ny mpampiasa amin'ny toerana azo idirana-board, amin'ny karatra microSD slot ho an'ny fanampiana bebe kokoa. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny afo ny 1.3GHz takelaka processeur sy 1GB ny RAM ny tsy ho ametrahany izao tontolo izao alight, fa izy kosa no mahagaga fa afaka amin'ny fitiliana. Ny takelaka Tsy indrindra sprightly miasa, sady tsy nisy izany haingana toy-feno.
Videos mavesatra ary nilalao avy hatrany, Lalao no malama ho an'ny ankamaroan'ny, anisan'izany-tsipiriany ny mafy lalao izay lehibe ny takelaka ny rahalahiny ny Fire HD 10 nangeja. Lalao toy ny Monument Valley naka ny entan'izy intsony noho ny iPad, ary ara eo nihazakazaka fampiharana dia kely kamo indraindray, fa na inona na inona izay loatra infuriating.
Ny bateria manodidina Naharitra dimy ora ny lahatsary playback ny varavarana lamba ho indrindra no tonga mamirapiratra, intsony izany kely matromatroka. Fa mamaly ny dia mora, naka mihoatra ny adiny dimy ny tanteraka handidy. Ny Wi-Fi sy Bluetooth niasa rehefa mety manantena. Ny karatra microSD slot tsy ampy ny fanampiana bebe kokoa fitehirizana.
Tsy ny iray ambient boky dia midika mazava sensor fanitsiana ny backlight ilaina, indrindra tara-masoandro mamirapiratra, na ao amin'ny hariva. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny afo takelaka mihazakazaka toy izany koa ny dikan-Amazon Android 5.1.1-monina Fire OS toy ny Fire HD 10. Mahatonga mahazo ny votoaty sy ny lalao haingana sy mora.
Izany ihany no manana ny mahazo ny fampiharana Amazon fivarotana, na izany aza, izay midika hoe voafetra ianao eo amin'ny safidy ny fampiharana sy ny lalao oharina amin'ny Google ny Play Store. Most, fa tsy izy rehetra ny fampiharana ambony dia misy, tahaka ireo tolotra lahatsary mivantana toy ny Netflix.
Ny afo koa ny Underground Amazon fanompoana, izay manolotra fampiharana maimaim-poana amin'ny maimaim-poana in-App fividianana, Raha manao famandrihana amin'ny ny orinasa fanompoana ny Prime.
Rehefa mety manantena, Amazon ny fampidirana ny tenany lahatsary, mozika, boky sy ny fiantsenana asa dia tsara.
Ny fakan-tsary dia mahantra, ihany no tena tsara ampy ho Snapchat. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Ny 2-megapixel fakan-tsary eo amin'ny indray dia mahatahotra. Izany Mamokatra sary ny momba ny toetra sy ny antsipirihany izany ho toy ny fakan-tsary CCTV, fa tsy misy tsara. Ny VGA selfie marginally fakan-tsary no tsara kokoa, fa tsy ny hoe be dia be.
Ny Amazon vidin'ny afo £ 50 fotsiny, ary tsy ampy amin'ny hadalana kely "mividy dimy hahazo iray maimaim-poana" (BFGOF) tolotra. Ny takelaka tonga amin'ny dokam-barotra momba ny hidin-trano efijery, na izany aza, ary manala azy ireo vidiny £ 10.
Ny akaiky indrindra avy Samsung takelaka notombohina tamin'ny vy na Asus vola maherin'ny £ 70.
Tsy misy mahafinaritra takelaka misy mihinjitra ny saina. Ny lamba dia iva vahaolana, ny bateria dia tsy haharitra izany ela, ny fakan-tsary dia woeful, fa mavesatra sy chunky ary izany ihany no manana ny anaty fitehirizana 5GB mora ny mpampiasa.
Tena tsy misy iPad na Rohy 7, saingy ho mora sy amim-pifaliana 7in takelaka izay mahatsapa toy izany dia haharitra ary tena tsy maninona raha tsy satria fotsiny mety hividy iray hafa.
Izany ihany no tena dikany raha misoratra amin'ny Amazon ny Praiminisitra fanompoana ho an'ny lahatsary, boky sy ny fampiharana, fa amin'ny £ 50 izany ny faniriana lalina Buy.
Mahatsara: levitra, Amazon Video, boky sy ny asa mozika, microSD karatra slot, mahatsapa maharitra
Maharatsy ny mifampiresaka: ambany-Res efijery, mavesatra, chunky, mahantra fakan-tsary, maka taona handidy, bateria tsy mahafinaritra ny fiainana
Ny takelaka mandray ny dimy ora handidy alalan'ny microUSB. Sary: Samuel Gibbs ho an'ny Guardian
Amazon.com, Android, Article, Gadgets, Famerenana, Samuel Gibbs, Tablet ordinatera, Teknolojia
← Blackphone 2 famerenana: Tsy manana fiainana manokana ho avy amin'ny vidin'ny fiasa izany Facebook fitiliana Snapchat fomba tena-destructing amin'ny chat in Messenger →